လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာကိုဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြား Ibadan တက္ကသိုလ် (၂၀၁၅) - Your Brain On Porn
Afr J ကို Med Med သိပ္ပံ။ 2015 Dec;44(4):321-7.
Salawu ကို AT, Reis SO, Fawole Oi, Dairo MD.
လူငယ်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြီးအကျယ်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးစေတယ်။ ဒါဟာအင်တာနက်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား (TV ကို) ကဲ့သို့သောအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏နိဒါန်းအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ကြပေမည်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်လူငယ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်, လူငယ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှာဖွေစူးစမ်းဒီပြဿနာတွေကိုရန်ကြားဝင်ပေးသည့်မူဝါဒထုတ်လုပ်သူကကူညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု Ibadan တက္ကသိုလ်အတွက်ဘွဲ့ကြို၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
ဒါက multistage နမူနာနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Cross-Section လေ့လာမှုကြီးနှင့်အချက်အလက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာမေးခွန်းလွှာမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တိုင်းတာ Variables ကို, အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာနှင့်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်မှထိတွေ့မှုလူမှုလူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ frequency စားပွဲထုတ်ပေးနှင့်ဒေတာများ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခြင်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
လေးရာသုံးဆယ်သုံးမေးခွန်း 456% ၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းပေးခြင်း, ဖြန့်ဝေ 95 ထဲကပြန်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဖြေဆိုသူအသက်အရွယ် 18.75 (SD က = 2.5) နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုဆိုလိုတာ။ အမျိုးသမီး၏ 58.4% ကအင်တာနက်နှင့် 58.6% လက်ပတ်နာရီတီဗီကိုအသုံးပြုဖို့အနေဖြင့်ယောက်ျား၏အကြောင်း 41.6% အင်တာနက်နှင့် 41.4% လက်ပတ်နာရီကို TV ကိုအသုံးပြုပါ။ အိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံ၏အင်တာနက်တိုးအန္တရာယ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုအကဲခတ် (OR = 3.1; CI = 1.2-7.7) TV ပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုစောင့်ကြည့်အိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံ (OR = 0.4 CI = 0.2-0.8) မှကာကွယ်ပေးသည်နေစဉ်။
အင်တာနက်အပေါ်လိင်တရားစွဲဆိုပစ္စည်းများမှထိတွေ့မှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ၏ဤလေ့လာတွေ့ရှိသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအင်တာနက်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုပေါ်ဤအကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များမှနျလူငယျမြား၏ access ကို, ကိုထိန်းချုပ်ထားဖို့ညွှန်ကြားခံရဖို့အားထုတ်မှုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။